DTG overprint marking si one piece - P&M COMPUTER EMBROIDERY → Nkwado uwe • Workwear
DTG ebi akwụkwọ - ohere ibipụta site na otu ibe
DTG mbipụta bụ otu ụzọ kachasị ọhụrụ iji gosi akara uwe na ngwa. Usoro DTG na-enye gị ohere itinye ihe eserese ọ bụla na akwa owu ma ọ bụ owu nwere ngwakọta nke elastane / viscose. Ejiri eserese pụrụ iche mepụta eserese. Ngwa ndị anyị nwere bụ ụdị ngwa nbipute kachasị ọhụrụ Nwanne GTXpro Bulknke, ekele maka isi ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-ebipụta ngwa ngwa na ihe ahụ. DTG ebipụta na-enyere aka mmeputakwa agba zuru oke na ntụgharị agba. Printing-ekwe omume na-enweghị mkpa iji kwadebe oru ngo si na otu iberibe.
Ihe nkpuchi nke owu na-ewu ewu, nke ụmụ nwanyị na nke nwoke, nwere ike nke mbipụta ọ bụla ma ọ bụ akara ụlọ ọrụ
Mbipụta ihe nkpuchi na ngwa site na iji usoro DTG nwere akara ọ bụla maka ndị ọrụ
DTG mbipụta dị mma maka akara ngosi n'ọtụtụ na mbipụta ole na ole
Mbipụta na T-shirts iji usoro DTG dị site na otu ibe
Followinggbaso ndụmọdụ ndị nrụpụta ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ mmetụta nke ọrụ anyị ogologo oge.
Ihe nkpuchi nke owu owu na profaịlụ DTG
DTG obibi akwụkwọna-ebi akwụkwọ na T-shirtsna-ebi akwụkwọ na uwe MasovianRawa Mazowiecka obibi akwụkwọMbipụta na uwe nwere akara DTGMbipụta na uwe ogologo ọkpaDTG Polandonye onyinyeonyinye t-uweT-uwe elu nwere akara Mszczonówt-uwe nwere ederedet-uwe elu nwere fotomaka onyinyeNtughari DTGoverprint DTG Mazowieckiebipụta LodzRawa logo ibipụtalogo mbipụta na okwu Lodzakara na ngwabipụta na sweatshirtsbipụta na okpuna-ebipụta uwe maka ndị ọrụebi akwụkwọ site na otu ibeAkara Warsawakara WroclawMbipụta na akwa T-shirts Katowiceonyinye na akara ngosi maka asọmpinaruk na akpauwe maka ndị ọrụ nke Strykówuwe nwere mbipụta NiepołomiceUwe eji akara aka DTG StrykówNiepołomice akara uweechicheonyinye maka ndị ọrụahaziri onyinyeonyinye na logoonyinye na fotouwe maka ndị ọrụuwe maka ụlọ nkwakọba ihe na mbipụtaDTG akaraakara uwe na Łódź